Joke – Blue Sea
အမျိုးသမီးနှစ်ယောက် ပါတီမှာ အရက်ကို လူမှန်းသူမှန်းမသိအောင် မူးနေတဲ့အပြင် ပင်လယ်စာတွေကိုလဲ တဝကြီးစားပြီး အိမ်ကို ကားမောင်း ပြန်လာတယ် လမ်းခုလတ်ရောက်တော့ အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်စလုံး ဝမ်းအသဲအသန် သွားချင်ရောတဲ့။ အဲဒါနဲ့ အနီးဆုံးသင်္ခင်္ျိုံင်းထဲကိုဝင် အင်းအင်းပါရော သူတို့ပါတဲ့နေရာကလည်း နေ့လည်ကမှ မီးသတ်ရဲဘော်တစ်ယောက် သေသွားလို့ မြှုပ်ထားတာ ပန်းခွေတွေရော ပန်းခြင်းတွေရော ပွနေတာ အဲ့ ပါလည်းပါပြီးရော အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်
#အပျိုကြီးတွေက_အဲ့လိုမျိုးလား …?😜😝😛 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ​မေ့​ဆေး ဆရာဝန်​က အပျိုကြီးကို မေးလိုက်​တယ် … “အသက်​ … ဘယ်​​လောက်​ ရှိပြီလဲ” “၂၄ နှစ်​ … ​လေ …” “အသက်​ကို … အမှန်​​ ဖြေ​နော်​ ​… မေ့​ဆေးက … အသက်​ အရွယ် အရ ချိန်​ဆပြီး
လင် နဲ့ မယား😄😃😀 ————————- *စစ်သားလင်မယား* ကျား ။ ။ ခြင်ထောင်ထဲဝင်ခွင့်ပြုပါ။ မ ။ ။ အမြန်ဝင် ပြီးရင်သတင်းပို့။ ကျား ။ ။ ဟုတ်။ —————————–*—————————- *ရှေ့နေလင်မယား* ကျား ။ ။ ခြင်ထောင်ထဲဝင်ရန်အကြောင်း ပေါ်ပေါက်ပါပြီမို့ ဝင်ခွင့်လျောက်ထားခြင်း။ မ ။
” အ​မေ ပိုက်​ဆံကိုး​ထောင်​​ပေး “
” အ​မေ ပိုက်​ဆံကိုး​ထောင်​​ပေး ” ” ဟဲ့ … ဘာလုပ်​ဖို့လဲ ပိုက်​ဆံကိုး​ထောင်​က ” ” ဧရာဝတီကို ပြန်​​ရွေးရမယ်​​လေ ” ” ဟ ! ဘယ်​ကဧရာဝတီကို ဘယ်​သူက ​ပေါင်​လို့ ငါက ပြန်​​ရွေး​ပေးရမှာလဲ ” ” အ​မေတို့အဲ့တာ ခက်​တယ်​​ပြောတာ​ပေါ့ ၊ အိမ်​ထဲ​နေပီး
ကဲကဲ ဖာလူဒါအ​ကြောင်းအရင်းအမှန်​ကို မသိကြ​သေးဘူး ဟုတ်​
blueseaskt | April 24, 2019
ဖာလူဒါ ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းရင်း **************** တရံရောအခါတုန်းက ပြည့်တန်ဆာ ၅ဦးက ဆရာတော်တစ်ပါးဆီကို အချိုပွဲဘောဇဉ်ကပ်မယ်လို့ သဘောတူပြီးတော့ သွားကြတယ်။ တစ်ဦးကို တစ်မျိုးဆီသာလှူဖွယ်ကပါတယ်။ ပထမတစ်ဦးက ရေခဲမုန့် ဒုတိယတစ်ဦးက နွားနို့ တတိယတစ်ဦးက ကျောက်ကျောမဲ စတုတ္ထတစ်ဦးက သာကူစေ့နဲ့ ပဉ္စမတစ်ဦးက မျော့ချောင်း (ကျောက်ကျောသာကူချောင်း)တို့ပါလာတယ်။ ဆရာတော်ဆီကိုမကပ်ခင်မှာ သူတို့ထဲက အကြီးဆုံးတစ်ဦးက အကြံပြုတယ်။ ငါတို့တွေ
‼️ဖတ်ပါ မှတ်ပါ End Game မပြခင် ကြိုပြောထားတာ‼️ ဒီတခါတော့ ရုပ်ရှင်ရုံထဲက တောသားတွေအကြောင်းပါ။ သို့ တောသူ၊တောသားများ ရုပ်ရှင်ရုံထဲရောက်ရင်/ -1- ဘာသာပြန်မပြကြပါနဲ့။ ပါးစပ်ပိတ်ထားကြပါ။ ဘာသာပြန်ရမှာ Channel Myanmar အလုပ်ပါ။ သင်တို့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ -2- နေကြာစိလေး တောက်တောက်ကိုက်လိုက် ဘေးကလူကို ပုကျုပုကျုပြောလိုက်မလုပ်ကြပါနဲ့။ စကားပြောချင် ရုပ်ရှင်ရုံ အဝင်ဝက
…..အမကြီးရယ် ဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ ============================ တခါတုန်းက…..မီးရထားပေါ်မှာ စီးနင်းလိုက်ပါလာကြတဲ့ ခရီးသည်တွေထဲမှာ နို့စို့အရွယ် ကလေးတစ်ယာက် နဲ့ မိခင်တစ်ဦးပါ ပါလာတယ်၊ ခရီးသည်တွေက များတော့ ကလေးက မနေတတ်ဘူး ငိုတယ်.. ဒါနဲ့ မိခင်က နို့လှန်တိုက်ပြီးချော့တယ် ဒါပေမယ့် ကလေးက အငိုမတိတ်ဘူး ဆက်ငိုနေတယ် ဒါနဲ့မိခင်က ချော့တယ် ချော့ပုံကဒီလို….ို ”သားလေးရယ်
အမှန်​​တော့ ထီးခိုးခံရတဲ့ကိစ္စက ကျ​နော်​နဲ့ခင်​ဝင့်​ဝါဓာတ်​ပုံတွဲရိုက်​​နေတုန်းဖြစ်​သွားတာပါ
အမှန်တော့ထီးခိုးခံရတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်နဲ့ ခင်ဝင့်ဝါဓာတ်ပုံတွဲရိုက်နေတုန်း ဖြစ်သွားတာပါ.. ပြဿနာအစကတော့ဒီလိုဗျို့.. အေးမြတ်သူလမ်းလျောက်လာ တုန်းမှာစော်ကြီးတဗွေနဲ့လက်ချင်းချိတ်ထားတဲ့ဘဲကြီးကအေးမြတ် သူရဲ့ဖင်နောက်ပိုင်းအလှကိုကြည့် လိုက်တယ်အဲအချိန်မှာတိုက် တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲမဏ္ပပ်ထဲကနေ “မင်းစော်ထက်ငါ့စော်ကပိုမိုက်တယ် ဟျောင့် ငါ့စော်ပိုမိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဘစိုင်းတို့ သီချင်းသံကထွက်လာရောဗျို့.. အဲဒါကိုကြားလိုက်တဲ့အသုပ် သည်အဒေါ်ကြီးက “နေတွေပူရတဲ့ကြားထဲထီးကယူ မလာလို့ဆိုပီးသူ့ယောက်ကျား ကိုဆူရောဗျ..်.အဲမှာဇာတ်လမ်းကစတာပဲ.. ခုနကဘဲကြီးလက်ချင်းချိတ်ထား တဲ့စော်ကြီးက fb ပေါ်မှာပုံတွေပွလာတဲ့အထိနှာဘူးထရမလားဆိုပီးတော့သူ့ဘဲနဲ့ ရန်တွေဖြစ်ကြပါလေရော အဲအချိန်ထိကိုကျွန်တော်နဲ့ခင်ဝင့်ဝါနဲ့က selfie ဆွဲလို့မပီးသေးဘူး ..အဲသိပ်မကြာခင်မှာပဲမိုးလေ၀သ
မိုးရွာလို့ မှိုထွက်​လာတာပါတဲ့ (ရီလိုက်​ရတာ အခွီ)
“အကျိတ်​အခဲ” တစ်​ခါက ရွာတစ်​ရွာမှာ လင်​မယားနှစ်​​ယောက်​ရယ်​​ ယောက္ခမရယ်​၊ ခယ်​မရယ်​ အတူ​နေထိုင်​ကြသတဲ့။ တစ်​​နေ့​တော့ ခယ်​မဖြစ်​သူက အ​နေအထိုင်​ မတတ်​​တော့ သားမက်​ကလည်း မ​နေနိုင်​မထိုင်​နိုင်​ “လျှပ်​စီး​တွေ လက်​လိုက်​တာကွာ” လို့ ခနဲ့သတဲ့။​ ယောက္ခမကကြီးကကြား​တော့ သူ့သမီးအငယ်​ကို​ ပြောတာပဲဆိုပြီး​ တေးထားသတဲ့.. ထမင်းတစ်​ဝိုင်းထဲ စားဖြစ်​​တော့​ ​ယောက္ခမက ဇွန်းကိုအိမ်​​အောက်​တမင်​လွှတ်​ချပြီး “သား​ရေ ဇွန်း​လေးကျသွားလို့ သွား​ကောက်​​ပေးပါကွယ်​”
blueseaskt | March 25, 2019
😥 ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းက ဒလို . . မင်းသမီးက ကြံ့ဖွတ် မင်းသားက ဒီမို အာ့တော့ မိဘတွေက သဘောမတူ ထုံးစံအတိုင်း ခိုးပြေးကြတော့ လမ်းမှာ YBS ကားကတိုက်. . ဒဏ်ရာနဲ့လဲနေတုန်း ဒရိုင်ဘာနဲ့ စပယ်ရာက သူတို့ ထမင်းအိုးရိုက်ခွဲလို့ ဆိုပြီ ဖနောင့်နဲ့လာပေါက်​တော့ ထွက်ပြေး ဒဏ်ရာက ထင်သလောက်မပြင်း